« Previous Next » New Archbishop for Central Africa
"The Electoral College of the Church of the Province of Central Africa that was held in Harare on 17 February 2011, Bishop Albert Chama of the Diocese of Northern Zambia was elected as the Archbishop of Central Africa. Archbishop Chama until yesterday has been acting as the Dean of the Province since the then Archbishop Bernard Malango resigned four years ago.
Please pray for Archbishop Chama for wisdom and strength in his new role."
The most recent story about Zimbabwe on the The Lead is here
The province, which includes 14 dioceses in Botswana, Malawi, Zambia and Zimbabwe, has been turmoil over episcopal elections in the Diocese of Lake Malawi and a split in the Anglican Church in Zimbabwe.
Diocese of Harare Bishop Chad Gandiya has reportedly asked for Zimbabwean police protection after alleging that breakaway Anglican Bishop Nolbert Kunonga was behind the murder of an Anglican priest in Murehwa.
Kunonga, then the bishop of Harare, was deposed in 2007 after illegally separating from the province and installing himself as archbishop of Zimbabwe. Kunonga is an avid supporter of Zimbabwe President Robert Mugabe, who has let the country slide into ruin during his 28-year rule. Kunonga has also supported the intimidation and persecution of Anglicans in Zimbabwe for opposing his and Mugabe's leadership. (photo by ENS)